Ukuqonda Okuncane Ngokusindiswa | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
ULin Qing Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong
Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bomndeni wami kanye nobenyama yami, bengilokhu ngibhizi usuku lonke ngenza imisebenzi yami ebandleni. Ngase ngiyakholwa: Inqobo nje uma ngingayeki umsebenzi wami ebandleni, ngingamkhapheli uNkulunkulu, ngingalishiyi ibandla, ngilandele uNkulunkulu kuze kube sekugcineni, ngizohlengwa ngisindiswe nguNkulunkulu. Ngibe sengikholwa ukuthi bengihamba ngendlela yensindiso kaNkulunkulu, futhi konke obekufanele ngikwenze ukuthi ngiMlandele kuze kube sekugcineni.
Kodwa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngibone umbhalo entshumayelweni ethi “Yilabo Kuphela Abazuza Iqiniso Bangene Empilweni Okuyiyo Abasindiswe Ngokwempela”: “Ukusindiswa nguNkulunkulu akulula njengoba abantu becabanga. Kumele sizwe ukwahlulelwa nokujeziswa kanye nokuhlolwa nokucolisiswa yizwi likaNkulunkulu isinyathelo ngesinyathelo. Kumele silandele eduze isinyathelo nesinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu, ekugcineni sizuze iqiniso sithole ukushintsha isimo sokuba isidalwa esisha, sincike eqinisweni lokunqoba phezu kukaSathane bese sidlula esonweni. Kufanele sikwazi ukuphila sincike emazwini kaNkulunkulu, silalele uNkulunkulu ngokuphelele nokuhambisana Naye. Yilokhu kuphela ukunqoba ngokweqiniso phezu kukaSathane, sidlule esonweni, sizuzwe nguNkulunkulu. Uma singazuza lo mphumela ngokuzwa umsebenzi kaNkulunkulu, kuyoba yilokhu kuphela ukusindiswa ngokweqiniso nguNkulunkulu.” “Endleleni yokufuna iqiniso nokuzuza insindiso ngoNkulunkulu, kusenobunzima obuningi nezihibe, njengokuhlukana komndeni phakathi, inhlekelele yemvelo neyenziwe ngabantu―lonke uhlobo lwezivivinyo nezinsizi abantu okufanele babhekane nazo. Impela akuwona umtshuzo olula, futhi uma abantu bengenalo iqiniso, abakwazi ukuma baqine, ithuba lokuthi bakhaphele uNkulunkulu lingamaphesenti ayikhulu” (Encwadini ethi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu). Emva kokufunda lokhu, ngazizwela sengathi ngivuka ephusheni. Ngakho-ke ukusindiswa nguNkulunkulu kwakungelula ngale ndlela engangicabanga ngayo; kuncike ekutheni abantu bezwe umsebenzi namazwi kaNkulunkulu kuzo zonke izigaba zendlela, bamukele ukujeziswa nokwahlulelwa, balungiswe baqondiswe, kanye nokuzwa ubumuncu balo lonke uhlobo lwezivivinyo nezinsizi. Ukuze bakwazi ukuzuza ukuqonda kweqiniso lesimo sabo sokukhohlakala bese kancane kancane bephuma enkohlakalweni, bese kuthi ekugcineni bancike emazwini kaNkulunkulu bancike eqinisweni lokunqoba phezu kukaSathane badlule emandleni obumnyama kuzo zonke izinhlobo zezindawo. Ukuzuza lo mphumela kuphela okungukusindiswa nguNkulunkulu. Kodwa ukuqhathanisa lokhu nesimo sami sangempela, ngangikude nokuzuza lowo mphumela. Zaziziningi izikhathi lapho noma ngangazi khona ukuthi ukulandela idumela nezikhundla bekungaveli kuNkulunkulu, ngaqhubeka ngazilandela lezi zinto, ngaba nokuphikisana futhi ngaphelelwa amandla uma ngingazitholi. Ngangiphelelwa umdlandla wami wokulandela iqiniso bese ngiwela ebumnyameni engangingakwazi ukuzikhulula kubo. Zaziziningi izikhathi lapho noma ngangazi ukuthi ukukholwa uNkulunkulu kusho ukuthi angilandele iqiniso lokubuyisela uthando Lwakhe nokuthi ngangingakwazi ukushintshisana noNkulunkulu, ngabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wawuthatha isikhathi ukuthi uphethwe ngase ngiqhubeka nokuba nokuphikisa ngaphakathi kimi. Amandla ami ezikhathi ezingaphambili anyamalala ngaphandle kokutholakala, ngaqhuba umsebenzi wami ngokunganaki. Uma ngiqala ukuba nezinkinga emsebenzini wami, nakuba ngangazi ukuthi kwakunguNkulunkulu lo owayengidlulisa kulobu nzima, ngaphakathi kwami ngangisenokungaqondi ngikhononda kuNkulunkulu. Ngazizwela ukuthi ukukholwa uNkulunkulu kwakunzima kakhulu, kukhathaza kakhulu, ngangifuna ukubaleka, noma ngiyeke umsebenzi wami. Kwakunezikhathi eziningi lapho noma ngangazi ukuthi indawo nabantu, nezimo, nezinto ezazingizungezile zazimiswe uNkulunkulu ukungiphelelisa, nokuthi kumele ngifune iqiniso kulezi zinto, uma ngibhekene nomuntu, isimo noma into engahambisani nokuqonda kwami, ngangimelana nayo ngingazimiseli ukuyamukela. Uma ngibona abantu benemindeni ejabulile lapho mina ngilahlwe engibathandayo ngingenandawo yokuphumula, ngangilokhu ngiluzwa usizi nobuhlungu ngalokhu, kuze kube sengathi ngingasuka kuNkulunkulu… Noma kunjalo, ngangicabanga ukuthi kade ngayithatha indlela yensindiso kaNkulunkulu. Ngibuka zonke lezi zimo zangempela, ngingaba kanjani nesiqu seqiniso? Ngenkathi ngibhekene nezilingo ezincane noma ukukhathazeka, ngaba sengozini yokuwa, ngingasabali ukukwazi ukuma ngiqine phakathi kwezinsizi nokuhlupheka. Ngaleso sikhathi ngabona ukuthi noma ngase ngimlandelile uNkulunkulu iminyaka eminingana ngaphandle kokuphela amandla, ngangingakalibambi kahle-hle iqiniso, nesimo sami sokuphila sasingashintshile nakancane. Ngangisaphila ngaphansi kwamandla obumnyama kaSathane ngingaphansi kobuqili nokukhwabanisa kwakhe. Lokhu kwakukude nemigomo yokusindiswa uNkulunkulu ngokweqiniso, kodwa ngangilokhu ngikholwa nokuthi kade ngangena endleleni yensindiso kaNkulunkulu futhi ngangicishe nganeliseke―lokhu kwakungukuzikhohlisa nje.
O Nkulunkulu, ngiyabonga! Kwakungukukhanyiselwa nokuyalelwa Nguwe okwangivumela ukuba ngibone kahle isimo sami sangempela kwangenza ngaqonda ukuthi insindiso yeqiniso iyini, ngaguqula ulwazi lwami lwakudala olungesilo. Kwangenza ngaqonda futhi ukuthi uma ngingazuzi iqiniso noma ngibe noshintsho esimweni sokuphila kwami, noma ngingakholwa uNkulunkulu iminyaka emingaki, ngeke ngizuze ukuvunyelwa Nguwe. Kusukela manje kuya phambili, ngizimisele ukujabulela le ngcebo yesikhathi yokungihlomisa ngeqiniso elingaphezulu kwaleli, nangokuzwa umsebenzi Wakho, ngizohlukana nesimo sami senkohlakalo. Ngizophila ngokwamazwi Akho bese ngikulalela ngokuphelele, bese ngizuza insindiso yeqiniso evela Kuwe.
Okwedlule：Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
Okulandelayo：Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini
UChaotuo Wasedolobheni laseXiaogan, Esifundazweni saseHubei Kusukela ekuzamazameni komhlaba komhla ka-12 eSichuan, bengihlala ngokwesaba futhi ngikhat…
Ngangiwumuntu ongumkhohlisi. Ezwini likaNkulunkulu singakubona lokhu ukuthi abantu abangabakhohlisi angeke basindiswe uNkulunkulu; abantu abaneqiniso kuphela abayothola udumo Lwakhe.
UBaituo Edolobheni laseDezhou, esiFundazweni saseShandong Ngaphambilini, ngangazi kuphela ukuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwakusetshenziswa kuncik…